Iindaba - Intshayelelo yoomatshini
Ukulungiswa kwemitshini kuqhelekile kwaye kudityaniswa yonke inkqubo yenkqubo. Ukulungiswa kwemitshini ekubhekiswa kuyo apha kubhekisa ngokukodwa kwiindlela zokuqhubekeka ezisetyenziselwa unyango lomphezulu womhlaba. Kukho ukugqagqana okungagqibelelanga kunye nokulungiswa kwemitshini kwi "Inkqubo yokuYila", kwaye kuya kufuneka unike ingqalelo kumahluko.
Zininzi iintlobo zoomatshini. Iindlela zokwenza ngokwesiko aziyonto ngaphandle kokujika, ukugaya, ukucwangcisa, ukugaya, ukubetha, ukusika, ukubhola, njl njl njl. Ezinye iindlela zobugcisa ezintsha ziyacetyiswa. Isithuba sale ncwadi silinganiselwe, ngenxa yoko andizukudwelisa zonke apha. Ndiza kukhupha kuphela ubuchwephesha obubandakanyekayo kuyilo lokuziqhelanisa nabaqulunqi, njengokwenza isanti, ukuzoba ucingo, ipolishi, ukunyathela kunye nokuqengqeleka.
Iimpawu zokuchwetheza zinokushwankathelwa njenge: isantya esiphezulu, ukusebenza ngokukuko kunye nokuchaneka okuphezulu.
Kwiindlela ezahlukeneyo zokwenza umatshini, iimpawu zazo zibonisiwe kule theyibhile ilandelayo:
Unokukhetha ngokungathandabuzekiyo phakathi koburhabaxa obahlukeneyo, ukuze ufumane uburhabaxa obahlukeneyo bendawo yokusebenza
Ngaba ukunciphisa uburhabaxa umphezulu workpiece, kwaye ufumane umphezulu egudileyo okanye isipili isilungiseleli seglosi
Inokuqhubekeka nakuphi na ukomelela okuphezulu, ukomelela okuphezulu, ukomelela okuphezulu, ubukrakra obuphezulu kunye nezinto ezisulungekileyo zokuziphatha; akukho mandla oomatshini ocacileyo ngexesha lokulungiswa, kwaye kufanelekile ukuba kusetyenzwe izinto ezomeleleyo kunye nezakhiwo ezintle
Ayikwazi ukutshintsha kuphela ipateni yoqobo yoomatshini okanye ukusilela komhlaba, gubungela kakuhle ipatheni yoomatshini kunye nokusilela kokubumba kwimveliso, kodwa ikwanempembelelo entle yokuhombisa
Isinyithi, iglasi, yodongwe
Isinyithi, i-ceramic, iglasi
Izinto zokuqhuba ezinje ngesinyithi
Isinyithi, i-acrylic, iPC, iPET, iglasi
Isandblasting yinkqubo esebenzisa umoya oxineneyo okanye amanzi ukuqhuba amasuntswana anzima ukubetha umphezulu womsebenzi ngendlela ehanjisiweyo ukufezekisa ucoceko okanye uburhabaxa. Iinjongo zomsebenzi ezinje ngokususa umhlwa, ukuxhoma iipeyinti, ukucoca njlnjl azizukuxoxwa apha. Ukusetyenziswa kwitekhnoloji yokubonakala kuxoxwa ngayo apha. Inkqubo ngokubanzi yesanti isetyenziselwa ukwenza umphezulu / matte / isanti umphezulu.
Isandblasting inokusetyenziswa kumphezulu wazo zonke izinto zokusebenza kubandakanya iiplastikhi, isinyithi, iglasi, iiseramikhi, njl.
Umzobo wocingo phantse yenye yeenkqubo zokuhombisa zesinyithi eziqhelekileyo. Inkqubo yokuzoba inokubonwa kwizinyithi, ngakumbi i-stainless steel, iiseramics kunye nezinto zeplastiki.
Umzobo wocingo ngokubanzi ubandakanya ukusila ngokwasemzimbeni, ukukrolwa kwe-CNC kunye nelaser, njl.
Ukuziqengqa, okwabizwa ngokuba kukujija, yinkqubo endala kakhulu. Imela ejijiweyo isetyenziselwa ukongeza iipateni zokuthambisa ezithe tye okanye ezinqabileyo kumphezulu wezinto zokusebenza zesinyithi ukwandisa ukungqubana kunye nokwenza lula ukusebenza. Nangona kunjalo, ngeemfuno zobuhle boluntu, i-aesthetics yenkqubo iye yanda ngokuthe chu, kwaye umsebenzi wokuhombisa weemveliso ezithile mkhulu kunomsebenzi osebenzayo.
Ukukrola kwe-CNC kukusetyenziswa kwe-CNC yokujika kunye nokukrola umphezulu womsebenzi. Iipateni ezenziwe ngebrashi kunye neCD zicocekile, zilungelelaniswe kwaye zihlala zihleli. Le ncwadi ibizwa ngokuba yinkqubo yenkqubo. Ukongeza, i-CNC imibhalo ekroliweyo inokulawula ubunzulu ukuvelisa iziphumo zoncedo.
Ipolishi ibhekisa ekusebenziseni oomatshini, imichiza okanye iziphumo zombane ukunciphisa ubungqongqo bomsebenzi wokufumana umphezulu oqaqambileyo ogudileyo. Kukusetyenziswa kwezixhobo zokucoca kunye namasuntswana abrasive okanye enye imithombo yeendaba wokucoca ukuguqula umphezulu womsebenzi.
Wokucoca ngoomatshini yindlela ipolishi exhomekeke ukusika kunye neplastiki deformation izinto eziphathekayo ukususa iindawo ezigudileyo ze-convex ukufumana umphezulu ogudileyo. Ngokubanzi, kusetyenziswa iincindi zamatye eoyile, amavili oboya, isandpaper, njl.njl.
Indlela yokuchaneka ngokuchanekileyo ingasetyenziselwa iimfuno zomgangatho ophezulu. Ukucocwa kwe-Ultra-ngqo kukusebenzisa izixhobo ezikhethekileyo zokurhabaxa, ezicinezelweyo kumhlaba ogqityiweyo wobugcisa bokusebenza kulwelo lokucoca oluqukethe ii-abrasives zokujikeleza ngesantya esiphezulu. Sebenzisa le teknoloji, ubunzima be-Ra0.008μm bungafezekiswa, obona buphezulu phakathi kweendlela ezahlukeneyo zokucoca. Le ndlela ihlala isetyenziselwa ukubumba iilensi ezibonakalayo.
Wokucoca ulwelo luxhomekeke kwisantya esiphezulu solwelo esibalekayo kunye namasuntswana esirhabaxa sithwalwa ngawo ukuhlamba umphezulu womsebenzi ukufezekisa iinjongo zokucoca. Iindlela eziqhelekileyo ezisetyenziswayo zezi: ukwenziwa kwejet esirhabaxa, ukuqhubekeka kwejethi engamanzi, ukugaya i-hydrodynamic njalo njalo.
Ukugaya i-Hydrodynamic kuqhutywa ngoxinzelelo lwe-hydraulic ukwenza ukuba ulwelo oluphakathi luphathe amasuntswana erhabaxa abaleke abuye umva ngaphaya kobuso bendawo yokusebenza ngesantya esiphezulu. Ulwelo oluphakathi lwenziwe ikakhulu ngezixhobo ezizodwa ezinokuhamba kakuhle phantsi koxinzelelo olusezantsi kwaye luxutywe neerrasives. Abrasives zinokwenziwa ngesilicon khabhayithi powder.
Ukugaya kunye nokucoca iMagnetic
Ipolishi Magnetic esirhabaxa kukusebenzisa abrasives ngemagnethi ukwenza iibhrashi esirhabaxa phantsi kwentshukumo kumazibuthe ukusila lo msebenzi. Izibonelelo zalo kukusebenza ngokugqwesa okuphezulu, umgangatho olungileyo, ulawulo olulula lweemeko zokulungisa kunye neemeko ezifanelekileyo zokusebenza. Sebenzisa iarrasives efanelekileyo, uburhabaxa bomhlaba bunokufikelela kwiRa0.1μm.